Ino nguva tichave neruzhinji beta yewatchOS 7 | Ndinobva mac
Ino nguva tichave neruzhinji beta yewatchOS 7
Tine zvakawanda zvakajairika mune akasiyana Apple anoshanda masisitimu, isu hatigone kukanganwa chitsva chakakosha maererano nevashandisi vanofarira kuyedza zvitsva vasati vaburitswa kuruzhinji uye izvi zvine hukama zvachose, kubvira gore rino isu tichakwanisa kuisa yeruzhinji beta vhezheni paApple Watch.
Zvine musoro isu tichafanirwa kuramba tichichenjerera nekuiswa kweiyo beta vhezheni paiyo wachi uye ndiko pane zvinhu zviviri zvakakosha zvekutarisa: Hazvigoneke kudzokera kumashure (zvirinani izvozvi) mune software kana paine matambudziko uye iyo iPhone inofanira kunge iine vhezheni inoenderana neWatchOS 7 yakaiswa, saka zvinodikanwa kuve neiyo beta yakaiswa pane yedu kifaa.
Kana iwe ukasangana nezvinodiwa izvi, iwe uchafanirwa chete kuwana iyo Apple webhusaiti uko yeruzhinji beta shanduro dzinoburitswa kune vashandisi uye ndizvozvo. Iyo yekuvandudza vhezheni ichiri iwo ma protagonists mune izvi, asi Apple inoda kuti iwe ugone kuyedza iyo zvitsva zvewatchOS 7 usati wazvimisikidza zviri pamutemo kuruzhinji uye vhura iyi yeruzhinji beta chirongwa.
Ehezve, vhiki mushure mekutanga kwemabheja ekutanga, zvinoita sekunge kuti pane matambudziko akawandisa mavari, ivo vanogonesa vanogonesa vanoramba vachitsvaga mabhugi mavari kuti vavandudze. Chero zvazvingaitika iwe unotoziva kuti izvi zvinoshanda sei, dambudziko diki rinogona kuve dambudziko hombe uye nezvimwe neApple smartwatch kuti hapana sarudzo yekudzokera kumashure. Zvakanakisa pane zvese ndezvekuti iyi watchOS isu tichakwanisa kuve nesarudzo yekuiisa, saka ndeyako wega anoda kuisa njodzi kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ino nguva tichave neruzhinji beta yewatchOS 7
Tom Hanks anoti kutanga "Greyhound" paApple TV + "kwakaperera pamoyo"
Excel yeMac ikozvino inotibvumidza kuunza matafura kubva kumifananidzo